» Qaliinkii Madaxweyne Hugo Chaves oo la sheegay in lagu guuleystay
Wasiiro xukuumada ka tirsan oo xabsiga dhexe tagay
Buulo-Barde oo lagu kala cararayo & Ciidamada Jabuuti oo….
Qaliinkii Madaxweyne Hugo Chaves oo la sheegay in lagu guuleystay
Dec 12, 2012 - jawaab	Qaliinkii lagu sameeyay madaxweynaha dalka Venezuela Chaves oo ka dhacay dalka Cuba ayaa la sheegay in lagu guuleystay in laga saaro madaxweynaha Unugyo yaryar oo cudurka Canser-ka ahaa,sidaasi waxaa sheegay madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Venezuela Nicolas maduro.
Madaxweynaha Dalka Venezuela ayaa waxa uu marayaa qaliinkiisii afaraad ee looga daweynayo cudurka Canser-ka kaasi oo loogu sameeyo magaalada Havana ee caasimada Cuba ilaa 2011 dii.
Dhamaadkii Todobaadkaan markii ugu horeysay madaxweynaha dalka Venezuela Chaves ayaa sheegay in ruuxa kaliya ee la wareegi kara xilkii u magacaabay Mr Maduro.
Isaga oo kasoo muuqday TV Madaxweyne ku xigeenka Venezuela Maduro ayuu sheegay in madaxweynaha qallinkii lagu sameeyay uu ahaa mid lagu guuleystay sida uu sheegay xaaladiisana tahay mid wanaagsan.
Waxa uu sidoo kale madaxweyne ku xigeenka uu sheegay in muddo lix saac ka badan uu socday qaliinka madaxweynaha dalka Venezuela.
Mr Chaves carruurtiisa iyo caruurta kale awoowaha uu u yahay iyo waliba asxaabtiisa siyaasada sida madaxa kala fadhiyada qaranka Diosdado Cabello iyo wasiiro kale ayaa ku sugan Havana si markaasi ay kaga agdhawaadaan Madaxweynaha Venisuela inta ay socdaan howlaha qaliinka ah ee u sameeynayo sidaasi waxaa sheegay Mr Maduro.
« Warbixinta Ka HoreysayMidowga Africa oo ka hadlay iscasilaadii Sheikh Diarra dalka Mali	Warbixinta Xigto »Faahfaahin :- Wafdigii kasocday dalka Jabuuti ee soo gaaray Muqdisho	Leave a Reply Cancel reply